Inkcazo ye-iPad iqala | Ndisuka mac
Besilinde ukufika kokuqalisa kwentetho kwaye ngoku Sele sine-Tim Cook endala eqongeni. Kule meko, njengakwinkcazo yangaphambili, umsitho wenziwa ngokusasaza ividiyo, ngenxa yoko ayingomboniso nje onjalo. Silindele ukubona iimveliso ezintsha apho i-iPad inokuba lundwendwe olukhethekileyo.
Njengamaxesha onke, umsitho uqale ngexesha elifanelekileyo kwaye kulindeleke ukuba ube nexesha elingaphezulu kweyure enesiqingatha, malunga. Ukususela ngoku, izinto ezintle ziqala!
Njengamaxesha onke kolu hlobo lwenkcazo I-Apple iya kubonelela ngedatha enxulumene nokusingqongileyo, amandla ahlaziyekayo kunye neminye imisebenzi yesisa eyenzayo rhoqo. Ngale ndlela, iApple ihlala izinikele kuzo zonke iintlobo zoncedo kumaqela asemngciphekweni kwanakunyamekeleni umhlaba wethu.
Sele sifuna ukubona iindaba ezizivelelayo kwaye ngaphezulu kwayo yonke le nto siyazi imihla esinokuthi sithenge ngayo okanye sigcine iimveliso Ngokufanelekileyo iimveliso ezintsha zinokuqalwa ukuthenga okanye ukugcina u-Lwesihlanu olandelayo Kwaye ziya kufumaneka ukuphela kweveki ezayo, ngokunokwenzeka ngoLwesihlanu olandelayo umhla wama-30.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ukuboniswa kwe-iPad kuqala